नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सडकमा बसेर जुत्ता सिलाउने, उध्रिएका कपडा सिउने, पान बेच्ने अबोधहरु सभासद बने, कठै यिनले कसरी बनाउलान संबिधान, देश को बेइज्यत !
सडकमा बसेर जुत्ता सिलाउने, उध्रिएका कपडा सिउने, पान बेच्ने अबोधहरु सभासद बने, कठै यिनले कसरी बनाउलान संबिधान, देश को बेइज्यत !
यस्ता सभासद चुन्ने पार्टीहरुलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो संबिधान सभामा पान पनि बेचिन्छ कि ?? उध्रिएका जुता चप्पल कपडा पनि सिलाइन्छ कि क्याहो ??!!
(Note : हामी महिला पुरुष, हरेक जात जाती, उनिहरुले गर्ने कामको, अनि आत्म सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछौँ तर देश चलाऊने मुल कानुन संबिधान बनाउन त अलिकती जान्ने बुझ्ने, संबिधान के हो ? कसरी लेखिन्छ ? यसले कसरी काम गर्छ ? भन्ने महसुस गर्न सक्ने मानिस चाहिने होला नि होइन र ??!! पार्टीहरुलाइ त्यता तिर इँगित गर्न खोजेको मात्र हो अन्यथा अर्थ नलागोस है ।)
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देशमा विचित्र विचित्रका सभासद् पैदा गरिरहेको छ । संविधान निर्माणजस्तो जटिल दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेका थुप्रै सभासद्मा संविधानको विज्ञता त छाडौँ
आधारभूत ज्ञानसमेत पाइँदैन । त्यसमा पनि केही सभासद् त पराकाष्ठा नै छन् ।
देशको राष्ट्रप्रमुखको समेत नाम थाहा नभएका व्यक्ति सभासद् छन् भनेर पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर, राप्रपा नेपालकी सभासद् श्रीकान्ती पासीलाई न देशको राष्ट्रप्रमुखको नाम थाहा छ, न सरकारप्रमुखको । संविधान लेख्न कस्सिएर पहिलोपटक कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आएकी यी ‘पानवाली’लाई संविधान भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन । तर, आफू संविधान बनाउन आएकी हुँ भन्नेचाहिँ थाहा छ । राप्रपा नेपालकै एक नेतामार्फत सम्पर्कमा आएकी पासीमा राजनीतिको सामान्य ज्ञान पनि नभएको पाइयो । अन्तर्वार्ताका लागि उनको मोबाइल नम्बरमा
सुरुमा सम्पर्क गर्दा पासीले कुराको मेसो पाइनन् र सँगै रहेका एक पुरुषलाई फोन दिइन् । ती पुरुष पासीसँग एउटै फ्ल्याटमा बस्ने अर्की सभासद् धानु महराका पति रामआशिष महरा रहेछन् । उनले नै अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिए ।
सोही फ्ल्याटमा बस्ने राप्रपा नेपालकै अर्की सभासद् धानु महराको प्रवेश भयो । उनी अलि टाठी देखिन खोज्दै थिइन् । क्यामरा देखेपछि उनलाई के लाग्यो कुन्नि, सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धी जसरी क्यामराअघि हात जोड्दै आफ्नो परिचय दिन थालिन् । ‘नमस्कार, म धानु महरा । घर सिन्धुली । राप्रपा नेपालकी सभासद् । अहिले संविधान लेख्न काठमाडौं आएकी छु...।’ धानुको ‘सक्षिप्त परिचय कार्यक्रम’ सकियो । यतिन्जेलमा कोठाभित्र अरू एक–दुईजना थपिएका थिए ।
प्रस्तुति : भुवन शर्मा / तस्बिर : सतिश पोखरेल / नयाँ पत्रिका